Iyo iPhone 13 uye zvese zvakaburitswa neApple mune yayo Keynote | Gadget Nhau
Miguel Hernandez | 16/09/2021 12:32 | Zviitiko, General
Iyo Cupertino kambani yaona zvakakodzera kupemberera yayo #AppleEvent yegore negore mairi iyo inotiratidza iwo mureza wayo maererano nenhare mbozha, iyo iPhone. Pane ino nguva, iyo iPhone 13 renji yakapihwa nezvakawanda zvitsva maficha, asi hazviuye zvega, hongu.
Pamusoro peiyo iPhone 13, Apple yakaunza iyo Apple Watch Series 7 uye yechitatu chizvarwa AirPods, ngatitarisei zvigadzirwa zvavo zvese. Tizivisei zvakadzama michina iyo Apple inotarisira kutonga mumusika mukati megore rino 2021 uye zvizhinji zvegore 2022, zvigadzirwa izvi zvichave zvine hunyanzvi zvakakwana?
1 iPhone 13 uye zvese zvakasiyana
2 Apple Watch Series 7, iyo hombe shanduko
3 Nyowani iPad Mini uye kuvandudzwa kweiyo iPad 10.2
iPhone 13 uye zvese zvakasiyana
Ngatitangei kutanga neiyi iPhone 13 uye zvese izvo maficha izvo mumwe nemumwe zvaachagovana. Yekutanga ndiyo inozivikanwa A15 Bionic processor, ino yakatsaurwa processor inogadzirwa neTSMC Inovavarira kuve ine simba kwazvo pamusika nekutenda kune yakasanganiswa GPU tekinoroji uye mbishi simba. Kune chikamu chayo, zvese zvishandiso zvichave neiyo nyowani Chiso ID 2.0 uye notch yakadzora kusvika ku20% diki kuti ushandise zvirinani nzvimbo uye upe chengetedzo huru kana uchizarura kumeso, chinhu chakatsvakwa zvakanyanya nevashandisi, mutauri achive akabatanidzwa mumucheto wepamusoro wechidzitiro.
Kune rimwe divi, ikozvino maPhones ese achave neakaenzana 18W kubhadharisa kuburikidza netambo uye 15W kuburikidza neMagSafe, pamwe nekubatanidzwa mukugadziriswazve kwezvigadzirwa MagSafe, kuve inoenderana neiyo yapfuura vhezheni yechaja isina waya iyo Apple yaita kuti ive yemafashoni. Saizvozvowo, maererano nekutaurirana pasina waya Apple yakafunga kubheja pane iyo WiFi 6E network, shanduko diki yeanozivikanwa weWiFi 6 samambure, kugadzirisa kugadzikana uye kutapurirana kwedata, nokudaro uchizvimisikidza sechigadzirwa chinotungamira maererano nehunyanzvi uhu.
Nezvikonzero zviri pachena, Apple inobhejera pane OLED mapaneru Kune ese zvigadzirwa, mune iyo iPhone 13 Mini ichave 5,4 inches, iyo inokwira kusvika ku6,1 inches yeiyo iPhone 13 uye iPhone 13 Pro uye inokwira kusvika ku6,7 inches mune Pro Max edition yeiyo iPhone 13. Sezvakatanhamara maficha, iyo iPhone mune yayo Pro renji ichave ine 120 Hz yekuvandudza mwero, chimwe chehunhu hunodiwa zvakanyanya nevashandisi mumakore apfuura.
Kana zvakadaro masimba ekuchengetedza iko kushandiswa kwe128 GB seyakajairwa inosvika zvechokwadi.
Izvi zvinoitikawo nemabhatiri, Apple vachibhejera zvinhu akakwirira mAh kugona kwawakamboshandisa kudhara, ehe, haizopa charger inosanganisirwa mubhokisi re iPhone.
iPhone 13 Mini: 2.406 naRaama
iPhone 13: 3.100 naRaama
iPhone 13 Pro: 3.100 naRaama
iPhone 13 Pro Max: 4.352 naRaama
Kunyanya isu tine shanduko mukamera huru inova Wide Angle ine gumi nembiri MP ine aperture f / 12 uye neamberi optical mufananidzo kudzikamisa system (OIS). Yechipiri sensor ndeye 12 MP Ultra Wide Angle iyo mune ino kesi inokwanisa kutora 20% yakawanda mwenje pane vhezheni yapfuura yekamera uye kuti ine aperture f / 2.4. Zvese izvi zvichatibvumidza kunyora mu4K Dolby Vision, mu Full HD inosvika 240 FPS uye kunyangwe kutora mukana we "cinematic" mode iyo inowedzera maitiro akamhanya kuburikidza nesoftware, asi inongorekodha kusvika ku30 FPS.
iPhone 13 / Mini: Main sensor + Ultra Wide Angle
iPhone 13 Pro / Max: Main Sensor + Ultra Wide Angle + Matatu-ekukudza Telephoto + LiDAR
Nemitengo pakati pe709 ne1699 euros Zvichienderana nechishandiso chakasarudzwa, dzinogona kuchengetwa musi waGunyana 16, nekutangisa kwekutanga kutanga munaGunyana 24.
Apple Watch Series 7, iyo hombe shanduko
Iyo Apple Watch yagara iine inozivikanwa dhizaini iyo yakashandurwa zvishoma kuita chinhu pamusoro pemakore, ichigadzira iyo brand standard uye nhevedzano yemaitiro ayo akamira pachezvayo seyemhando yeiyo brand. Nekudaro, Apple yakafunga kusagadzirisa dhizaini yeiyo Apple Watch Series 7 kuti ikupe pfungwa yekuenderera mberi neako akawanda-anodikanwa iPhone, iPad, uye MacBook. Aya ndiwo mabviro akasiya Apple ma curve eApple Watch achishandira kupa dhizaini yakafanana neiyo yeApple Watch Series 6, kunyanya muchiitiko ichi, sezvo skrini ikozvino yasvika pakunyanyisa uye ichionekwa kubva kumativi, chimwe chinhu. avo vashandisi ivo vange vachikumbira kare kare.
Mashoma maficha manyowani padanho rehunyanzvi kupfuura iyo nyowani processor uye kugadzirisa kugona, zvakakosha maficha eApple Watch Series 6 inosara, senge electrocardiogram uye altimeter. Zvakawanda zvakataurwa nezve sensor yemuviri tembiricha iyo isina kuzombosvika. Rudzi rwayo rutsva uye rwakasiyana-siyana rwemavara harubve paruoko rwekuvandudzwa muhukuru, kunyangwe iwo mativi akaderedzwa ne40%, kunyangwe isu tichava neshanduro musimbi, titanium nealuminium. Mutengo uchatanga pa429 euros yeiyo yakanyanyisa vhezheni yechigadzirwa uye isu ticharamba tichive neshanduro neLTE kana izvo zvichizogumira kuBluetooth + WiFi yekubatana zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi wega wega. Zvichakadaro, Apple haina kupa chaiwo mazuva ekuvhurwa kwayo, ivo vanozoisiya iyo kudonha.
Nyowani iPad Mini uye kuvandudzwa kweiyo iPad 10.2
Kutanga kunouya nyowani iPad Mini iyo inowana kugara kweanoshanda eiyo iPad Mhepo, yekumucheto-kune-kumucheto sikirini ine matete mativi nemakona akapoteredzwa, 8,3 inches pasina Yakabatanidzwa Face ID, ine Kubata ID pane bhatani remagetsi. Mune ino nyowani iPad Mini isu tine iyo nyowani A15 Bionic, processor iyo nenzira inokwira mu iPhone 13 uye 13 Pro, pamwe nekubatana kwe5G iripo kurudyi kune USB-C tambo yekubatanidza zvishongedzo.
Kana iri iyo iPad 10.2, inochengetedza mutengo wayo uye haigadzi chero hunyanzvi padanho rekugadzira, asi ichaisa imba nyowani 12MP FaceTime kamera ine 122º Wide Angle sensor uye Apple's A13 Bionic processor.
Idzi ndidzo nhau dzese dzakaburitswa nekambani yeCupertino panguva yechiitiko chayo nhasi, ichakurumidza kuwanikwa munzvimbo hombe dzekutengesa pamwe neiyo chaiyo uye yepamhepo Apple Chitoro, kunyangwe iwe uchigona kuita zvakajairika kuchengetedza. Zvinonyatso kuzivikanwa kuti Apple inowanzo kupa "diki" stock yezvigadzirwa izvi pazuva ravo rekutanga, tinovimba hatisi kuona mitsara yakajairika muApple Chitoro senge iri pre-COVID nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Iyo iPhone 13 uye zvese zvakaburitswa neApple mune yayo Keynote
Sonos inozivisa yechipiri-chizvarwa Beam, mutengo-performance hit